Youtube TV vs Hulu Live (2020) - Nderipi riri Rakanakisa Sevhisi? - Varaidzo
Youtube TV vs Hulu Live - Nderipi riri Rakanakisa Sevhisi?
YouTube TV uye Hulu Live ndidzo mbiri dzedzimwe nzira dzakakurumbira pane tambo. Ose maviri eTV masevhisi akavhurwa muna 2017 uye ane inonakidza muunganidzwa emuno chiteshi.Youtube Tv uye Hulu Rarama zviri zviviri mapuratifomu evhidhiyo ekushambadzira.
YouTube TV uye Hulu Live vane muunganidzwa wepakutanga anoratidza uye yakasarudzika chiteshi mutsara.Sarudzo yemitambo yeYouTube TV iri nani pane Hulu Live, asi Hulu Live TV ine sarudzo yakanaka yenhau uye nzira dzevaraidzo.
Kana zvasvika kune zvemukati zvemukati, YouTube TV ine akati wandei kuunganidzwa kupfuura Hulu anayo. Nekudaro, Hulu Live ine huwandu hwakawanda hwehunhu zvemukati. Iko hakuna akajeka anokunda pano, iwe unofanirwa kusarudza zvinoenderana nerudzi rwei zvemukati zvaunofarira.
Saka, Hulu Live kana YouTube TV ndiyo iri nani kwauri?Ose ari maviri akafanana kunze kwemutengo uye zvakare chiteshi kuverenga, asi isu tine chokwadi chekuti iwe uchadzidza pano musiyano chaiwo uye ndeupi kurarama TV kutenderera sevhisi ndiyo yakakwana yako.
Nezvose zviri zviviri YouTube TV uye Hulu Live, iwe unowana izvo zvaunobhadhara.Ose mapuratifomu aya ari pakati peakanakisa kurarama mapuratifomu ekushambadzira inowanikwa nhasi uye zvese zviri zviviri zvinokurudzirwa kwazvo. Ose ari maviri anoshanda seimwe nzira kune tambo TV uye anofanirwa zvirokwazvo kufunga nezvevachangobva tambo-vanocheka.
Youtube TV vs Hulu Live - Yakadzama Kufananidza
YouTube TV uye Hulu Live zvine misiyano yakawanda kana zvasvika kune chiteshi. YouTube TV inopa vashandisi vakakomberedza 67 chiteshi kunze kwenzira zana dzepamusoro pane yese sevhisi, nepo Hulu ichipa chete makumi mashanu nemasere.Zvakangodaro, mapuratifomu ese ari maviri anogovera nzira dzinozivikanwa dzinosanganisira Cartoon Network, Disney Channel, ESPN, Fox News, TBS, USA Network, nezvimwe.
Iyo YouTube TV interface iri nyore. Une Kumba, Raibhurari, uye Live TV tabo, ayo zvakare anotendera iwe kuti utaridze kuburikidza neanoratidzira zviratidzi uye zvinyorwa zvemukati, kana tarisa chimwe chinhu chawakatonyora kare paDVR.
Iwe unogona zvakare kushandisa yekutsvaga basa kubva kune chero tebhu, kuti iwe ugone kuwana zvauri kutsvaga.Iyo DVR basa inoita kuti iwe utore risingagumi TV, asi iwe unogona chete kungo chengeta kurekodha kwako kwemwedzi mipfumbamwe.
Hulu's Live TV interface ine grid-based maonero. Iwe unogona kutarisa zviripo zviratidziro zviripo paHulu kana kutarisa kuburikidza nemabhaisikopo uye zvinoratidza iwe watove wakanyora.Iyo ine hwindo rakakura rinotarisa izvo zvinoita kuti zvive nyore kuwana izvo zvaunoda kutarisa usingatombofananidza nemapeji ezvinyorwa.
Youtube Tv Vs Hulu Live - Anotsigirwa Midziyo
Pakatanga YouTube, yaingotsigirwa mumidziyo mishoma. Zvisinei, izvo zvakachinja munguva pfupi.Iye zvino inowanikwa kumabhokisi eRoku, Apple Tv, Google Chromecast , Firesticks nemaTV, zvishandiso zveApple uye maTV anomhanya neApple TV, Xbox One, zvishandiso zveIOS, Apple TVs kuburikidza neAirPlay, uye smart TV kubva kuLG uye Samsung.
Hulu Live TV inowanikwa pane zvishandiso zveApple, Apple TV, LG Smart TV, Mac, Amazon Fire TV, uye Moto TV inonamira , PC, Rokus, Chromecast, zvishandiso zveIOS, uye Xbox One.Hulu ndiye chete mupi webasa anowanikwa pane inotakurika Nintendo Chinja koni.
YouTube TV vs Hulu Live - Mutengo
Kana zviri zvemutengo, YouTube TV yakawedzera mutengo wayo kusvika $ 65 / mwedzi. Saka, Hulu + Live, inodhura madhora makumi mashanu nemashanu / mwedzi inowana mukana pano sezvo iri yakachipa pane YouTube Live.Kana iwe uchitsvaga mutengo wakaderera kana wepagore, hapana chimwe cheizvi chine dhisikaundi kupihwa kana chirongwa chegore negore, saka Hulu Live uye YouTube TV zvakaenzana kana zvasvika pakuchengetedza.
Ose Hulu neYouTube TV inopa mazuva manomwe emahara ekuyedza nguva.Hulu + Live TV inosanganisira yakakosheswa-inotsigirwa, iyo inogona kubviswa nekubhadhara imwezve $ 6 / mwedzi.
Zvakare, kugadzirisa chirongwa chako neyakagadziridzwa DVR uye isina muganho screens, Hulu Live chirongwa chinogona kutora imwezve $ 15 / mwedzi pamusoro peizvozvo.
Youtube Tv Vs Hulu Live - Zvimiro
YouTube TV inodhura madhora mazana masere nemakumi matanhatu nemana pamwedzi nepo Hulu Live inodhura madhora zviuru makumi mana nemakumi mana nemwedzi (nezviziviso) uye kana uchida pasina kushambadzira, zvinokubhadharisa madhora makumi matanhatu nemakumi matanhatu pamwedzi
YouTube TV ine mazuva gumi nemana ekuyedza yemahara. Hulu Live ine mazuva manomwe ekuyedza nguva kana kana pasina kushambadzira.
YouTube TV ine yakatenderedza 85+ nhamba yematanho uye Hulu Live ine 65+ nhamba yematanho.
Cloud DVR inochengetera paYouTube TV haina muganho iyo inoshanda chaizvo zvakare. Asi, muHulu Live iri maawa makumi mashanu pamutengo we $ 55. Iwe unogona kukwidziridza iyo DVR Kuchengetedza kugona nekubhadhara imwezve mari ye $ 10.
Kune akakomberedza matatu panguva imwe chete hova paYouTube TV. Asi, muHulu Live pane chete 2. Unogona kubhadhara Hulu kutenderedza $ 10 yekuwedzera pamwedzi uye zvakare ichavandudza yako huwandu hwenzizi kusvika parinogumira.
Iyo yekutarisa isingawanikwe haina kuwanikwa paYouTube TV nepo ichiwanikwa muHulu Live pasina kushambadzira.
YouTube TV uye Hulu Live vese vane ma ads. Asi, muHulu Live, kana iwe ukabhadhara zvimwe unogona kubvisa ma ads. Zvisinei, haugone kuibvisa kubva kuYouTube TV. Unogona kusvetuka kushambadza zvakadaro.
Hulu Live ine akati wandei maficha ehukama uye iwo akati siyanei zvishoma neayo eYouTube TV.
Iwe unogona kumisikidza ma profiles evashandisi vakasiyana uye wo gadza yako wega wega Taste Picker marongero uye chengetedza zvemukati munzvimbo Yangu Yezvinhu. Vashandisi vayo vanogona zvakare kufarira uye kusada anoratidza uye mabhaisikopo ayo anobatsira Hulu Live kuenzanisa zvaunofarira. Kana iwe usina kugutsikana nezvakakuratidzwa naHulu, unogona kusarudza kumira kugamuchira mazano kubva kumupi webasa.
Iwo ekupindirana uye mamamenyu pane ese mapuratifomu akasiyana kubva kune mumwe uye kubva kune yakajairwa tambo.
YouTube inoita kuti vatengi vayo vatungamire yavo gwara kunyangwe ivo vachisarudza - alfabheti kana kuunganidzwa nerudzi (mitambo, nhau kana mabhaisikopo, nezvimwe.) Kune rimwe divi, Hulu ine My Channels tab uko iwe kwaunogona kuchengeta ako aunofarira.
Dhairekitori reYouTube riri nyore kubata nepo Hulu gwara racho rakaomarara.
Chimwe chinhu chinoshamisa chinopihwa nemupi wese wese webasa kugona kutsvaga zvikwata zvemitambo zvaunoda uye wobva wawedzera kune zvinyorwa zveDVR zvinozokubatsira kuti ugare uine mitambo yazvino mumutsetse wako kumusoro.
Kana iwe uri kunyatso tarisa kucheka tambo pane tambo uye uchivimba neinternet based kutenderera chikuva cheako live TV, iwe zvechokwadi uchawana izvo zvaunoda pamwe neYouTube TV kana Hulu Live. Vanopa sevhisi seYouTube TV neHulu Live vanga vachipa masevhisi epamusoro kuvashandisi vayo nemitengo inonzwisisika.
YouTube TV yakanakira avo vanoona vanoda nzira dzakanyanya dzemutengo wakanakisa, nepo Hulu Live inogona kuve yakanaka kune avo vanofarira kusunga TV yavo mhenyu uye neanoda-kutenderera masevhisi.
Kana iwe uchifarira kwazvo nhau kana zvemukati zvekutanga zveHulu, saka zvimwe kwauri Hulu Live inogona kunge iri nani, asi kune mumwe munhu anonyanya kuita zvemitambo, YouTube TV ichave iri yepamusoro. Kana iwe uchiri kusava nechokwadi uye uine chero mhando yekusahadzika nezve ese masevhisi uye usingakwanise kusarudza imwe, ingo shandisa mahara maedzo emumwe neumwe wevapi vevashandi uye zvionere wega!
U nblocked Music Sites - Teerera Mimhanzi Kwose
Chii Chaunotarisa pane Disney Plus?
Ungawana Sei Mahara PSN Makodhi - jenareta Anoshanda Chaizvo?
Nvidia Geforce RTX 3060 Ti - Zvese Zvakatsanangurwa
amazon prime nhengo yevadzidzi vekoreji
yemahara prime neemail email
tarisa akazara mafirimu epamhepo pasina kusaina kumusoro
is amazon vhidhiyo yemahara ine prime
mashandisiro aungaita google chromecast palaptop